जब हराएको ३७ वर्षपछि जहाजले ल्याण्डिङ अनुमति माग्यो… « Asia Sanchar : Nepal News Live
काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा एक विमानले उडान भरेको ३७ वर्षपछि अवरण अनुमति मागेको समाचार छ्यमप्छ्याप्ती पाइन्छ। तत्कालिन समाचार संस्थाहरुले तयार पारेको रिपोर्ट नयाँ खुलेका सञ्चारमाध्यमले पनि साभार गरेको पाइन्छ।
महिनौंसम्म खोजी गर्दा पनि नभेटिएपछि प्लेन दुर्घटना भएको आधिकारिक घोषणा गरिन्छ। तर अचम्म सोही प्लेन उडान भरेको ३७ वर्षपछि अवतरण हुन पुग्छ। केही घण्टाका लागि उडेको डिसी ४ फ्लाइट नम्बर ९१४ हराएको ३७ वर्षपछि कसरी अवतरण हुन पुग्यो ? त्यसबीचमा सो प्लेन कहाँ गएको थियो ? जिज्ञाशा हुन सक्छ।
पृथ्वीमा ब्लाक होल हुनु सम्भव छैन। अर्को कुरा फ्लाइट ९१४ दुई इञ्जिन जडित प्लेन हो। यसको गति अहिलेको विमानकोभन्दा निकै कम थियो। यस्तो अवस्थामा प्रकाशको गतिभन्दा छिटो विमानको गति भएको मान्न सकिँदैन। यो घटना टाइम ट्राभलका कारण सम्भव भएन। त्यसो भए वास्तविकता के हो ?
अब घटनाको रहस्य बुझ्नका लागि पाइलटले छाडेको १९५५ को क्यालेण्डरको अध्ययन गर्नुपर्छ। ती पाइलटसँग सो वर्षको क्यालेण्डर किन र कहाँबाट आयो ? उडानको समयमा पाइलटलाई दिनबार याद रहन्थ्यो होला त ? त्यस्तै त्यो कुन फाइल थियो, जहाँबाट क्यालेण्डर झरेको थियो ?
त्यसपछि हरेक प्लेनमा एउटा चेकलिस्ट राख्नुपर्ने घोषण गरियो। चेकलिस्टमा पाइलटका लागि आवश्यक हरेक कुराहरु लेखिएको हुन्छ। फ्लाइट ९१४ का पाइलटसँग पनि सो कुरा भएको हुनुपर्छ। तर यहाँ क्यालेण्डरको के सम्बन्ध ?
वास्तविकता के हो भने न यस्तो विमान कहिल्यै बनेको थियो न १९५५ मा त्यस्तो घटना नै भएको थियो। त्यसो भए कसरी यो कुरा भाइरल भयो त ? शुरुमा भेनेजुएलाको एक पत्रिकामा प्रत्यदर्शी भनि जोनको फोटोसहित यो समाचार छापिएको थियो।